Pyae Phyo (MMiTD): January 2017
ကွန်ပျူတာဝယ်သည့်အခါ တရားဝင် OS နှင့်အတူ ဝယ်သည်ဖြစ်စေ၊ pirated OS နှင့်အတူ ဝယ်သည်ဖြစ်စေ မိမိနှင့်အဆီအငေါ်မတည့်သည့် Software များပါလာမည်မှာ အမှန်။ တရားဝင် OS နှင့်အတူဝယ်ပါက သုံးလသက်တမ်း၊ ခြောက်လသက်တမ်းသာရှိသော Software များ ထည့်ပေးခြင်း၊ တစ်လအစမ်းသုံး Software များထည့်ပေးခြင်းမျိုးရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ အတော်ကြာနေလျှင် သက်တမ်းကုန်မည်ဖြစ်ပြီး စက်ထဲတွင်ဖောင်းပွကာ ဒုက္ခပေးမည်ဖြစ်၍ bloatware ဟုခေါ်သည်။ Pirated Software နှင့်အတူ ပါလာသည်တို့က ပိုဆိုးနိုင်သည်။ ရှိသမျှ အခမဲ့ Software ပေါင်းစုံနှင့် crack ဖြည့်ထားသော ဂိမ်းပေါင်းစုံထည့်ပေးမည်ဖြစ်၍ ကွန်ပျူတာစက်လေးနိုင်သည်။
OS များထဲတွင် မလိုသော Software များဖယ်ရန်အတွက် Uninstaller များ အသင့်ထည့်ပေးထားပါသည်။ သို့သော် ယင်းတို့က မပြည့်စုံပါ။ User preference ဖိုင်များချန်သည်။ Restore လုပ်ဖို့လိုသောဖိုင်များ ချန်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ Uninstall လုပ်ရင်း ထွက်လာသော Temp ဖိုင်များ ရှိသေးသည်။ ယင်းတို့က Registry မှာဝင်ထောက်နေလျှင် ကွန်ပျူတာလည်ပတ်ဖို့ ဒုက္ခရောက်တော့သည်။ သို့ဖြစ်၍ Software တစ်ခုကို uninstall လုပ်သည့်အခါ ဖျက်သင့်သမျှ ဖိုင်အားလုံးကို ပြောင်စင်အောင်ဖျက်ပေးမည့် Uninstaller Software လိုသည်။ ယင်း Uninstaller များထဲတွင် အခမဲ့ရနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးအဆင့်တွင်ရှိနေသည်မှာ Revo Uninstaller ဖြစ်သည်။
Revo Uninstaller ကို www.bit.ly/ revo 408 မှနေ၍ download ချနိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာအတွင်းပိုင်းတွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကျန်နေသောဖိုင်အစအနများကို ပြောင်စင်အောင်ရှင်းပေးနိုင်သည်။ Windows တွင် ထည့်ပေးထားသော Uninstaller များ သွားဖွင့်ပြီး သုံးသည်ထက် Revo Uninstaller သုံးသည့်က အချိန်ပိုပြီး မကြာပါ။ သုံးရသည်မှာလည်း အလွန်လွယ်သည်။ Revo ၏စာရင်းထဲတွင် မြင်နေရသော program တစ်ခုကို ဘယ်ကလစ် နှစ်ချက်ခေါက်ရုံသာ ဖြစ်သည်။ ယင်းက Uninstall ကို အလိုအလျောက်ရွေးပေးပြီး program နှင့်ပတ်သက်သည့် Registry ဖိုင်များ၊ အကြွင်းအကျန်ဖိုင်များကို ပြသပေးပါသည်။
ယင်းဖိုင်များကို မြင်တွေ့ရပြီးသည့်နောက်တွင် select all ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ရွေးရပါမည်။ ယင်းတို့အားလုံးကို ဖယ်ရှားရန် Delete ကို နှိပ်ရပါမည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ထဲတွင် တစ်ခုခုအမှားအယွင်းဖြစ်ခဲ့ပါက နောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်စေရန် restore point ဖမ်းပေးထားခြင်းမှာ Revo Uninstaller ၏ ချစ်စရာကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်။ Revo Uninstaller ကို download ချရသည်မှာ လွယ်ပါသည်။ သို့သော် website ၏ အပေါ်နား၌ Revo အခ ပေး pro version နှင့် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ် အောင်လုပ်ထားခြင်းရှိသည်။ Web Page ၏အောက်ဘက်နားသို့ ဆင်းသွားပြီး Revo Uninstaller Freeware စာသားဘေးရှိ Free download တွင် နှိပ်ရပါမည်။
အခမဲ့ရသော Revo Uninstaller တွင် Junk ဖိုင်များ မပါပါ။ Windows XP, Vista,7သုံးသူများသည် portable version ကို သုံးနိုင်သည်။ Portable version ကို အလိုရှိလျှင် Other downloads ခေါင်းစဉ် အောက်သို့သွားပြီး download button ကို နှိပ်ရပါမည်။ Revo တွင် Hunter Mode tool ပါသည်။ Program များကို ယင်း tool ဖြင့်စစ်ဆေးပြီး force stop လုပ်နိုင်သည်။ ယင်းမျှနှင့် မလုံလောက်ပါက လုံးလုံးလျားလျား Uninstall လုပ်ပစ်နိုင်သည်။ Windows တက်ချိန်တွင် Windows နှင့်အတူ အလိုအလျောက်လိုက်တက်သော program တို့ကို ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ Uninstall mode တွင်မပါဝင်သော program တို့ကို Uninstall လုပ်လိုပါက hunter mode က အသုံးဝင်သည်။
Start up program တို့သည် မိမိ၏ System tray တွင်ရှိနေမည်။ ယင်းသည် taskbar ပေါ်ရှိ နာရီဘေးတွင် pop-up window အဖြစ် ဖုံးကွယ်ပြီး ရှိနေပါသည်။ System tray ထဲတွင် ရှိသမျှ အရာအားလုံးသည် junk ဖိုင်မဟုတ်ပါ။ ယင်း Pop-up window ထဲတွင် antivirus လည်းပါ ကောင်းပါနိုင်သည်။ Antivirus သည် ကွန်ပျူတာထဲတွင် အရေးအကြီးဆုံး program ဖြစ်သည်။ အခြားအရေးကြီး program ဖိုင်များလည်း ယင်းနေရာတွင် ရှိနိုင်ပါသည်။
Hunter mode ကိုသုံးရန် ဦးစွာ Rvo installer ကို install လုပ်ပြီး ခေါ်တင်ရပါမည်။ Default အနေဖြင့် ယင်းက ကွန်ပျူတာထဲတွင် install လုပ်ထားသော program များကို ပြသပေးပါမည်။ ထိုအချိန်တွင် Hunter Mode ကို ရှာပြီး နှိပ်ပါ။ Revo Window ပျောက်သွားသော်လည်း program မှာ ဆက်၍ အလုပ်လုပ်နေပါ သည်။ စက်ပစ်ကွင်းပုံသဏ္ဍာန် target icon လေးကို မြင်လာရပါမည်။ ယင်း icon ပေါ်တွင် ညာကလစ် ထောက်ပါ။ ပြီးလျှင်ကျလာသော box ထဲမှ Auto start with windows ကိုရွေးပါ။
ပြီးလျှင် PC ကို Restart ပြန်ချပါ။ Hunter Mode icon သည် desktop ပေါ်တွင် ပေါ်နေပါမည်။ ကွန်ပျူတာ၏ system tray ကိုဖွင့်ပါ။ Hunter Mode ကို drag ဖိဆွဲလာပြီး shortcut တစ်ခုခုနေရာသို့ ပို့ပါ။ ယင်းနေရာရောက်လျှင် mouse ဖိထားခြင်းကို လွှတ်ပါ။ မိမိပိတ်လိုသော program အတွက် Menu ထဲရှိ Kill and Delete process ကို ရွေးပါ။ အကယ်၍ Rvo သုံးပြီး လုံးဝဖယ်ရှားလိုပါက Uninstall တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။
Software များကို တစ်ခုချင်း Uninstall လုပ်ရခြင်းက လက်ဝင်သည်။ အစုလိုက် Uninstall လုပ်နိုင်လျှင် ကောင်းမည်။ အသစ်ထွက် Iobit Uninstaller သည် ယင်းကိစ္စအတွက်ကောင်းသည်။ Batch Uninstall ကို သူ့ Window ထဲမှနေ၍လုပ်ခွင့်ပြုသည်။ ဤ Software ကို www.bit.ly/iobit 408 မှ download ဆွဲချပြီး သုံးနိုင်သည်။ Program ကိုခေါ်တင်ပြီးနောက် မိမိဖယ်ရှားလိုသည်တို့ကို တစ်ခုချင်းရွေးချယ်ပါ။ Program တစ်ခုကို ရွေးလိုက်တိုင်း နေရာလွတ်မည်မျှထွက်လာသည်ကို Iobit က ပြပေးပါသည်။
Program များအားလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း Uninstall ပြုလုပ်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ တစ်ခုပြီးတစ်ခု Uninstall လုပ်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ထုိ့ကြောင့် တစ်ခု Uninstall လုပ်တိုင်း တစ်ကြိမ် Confirm လုပ်ရပါသည်။ ထို့ ကြောင့် Uninstall လုပ်ငန်းမပြီးမခြင်း Iobit ထဲမှ ထွက်၍မရပါ။ Revo နှင့် မတူသည်မှာ Iobit သည် restore point ကို အလိုအလျောက် မဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် restore point ဖန်တီးလိုခြင်း ရှိ၊မရှိလာ၍ မေးပါမည်။ Restore point မဖန်တီးခြင်းက ကွန်ပျူတာထဲတွင် space ပို၍ ထွက်လာစေနိုင်သည်။ Restore point များသည် ကွန်ပျူတာထဲတွင် နေရာယူမှုကြီးပါသည်။
အထက်ပါ program နှစ်ခုက Uninstall လုပ်ငန်းစဉ်ကို လွယ်ကူစေသည်ဟုဆိုသော်လည်း မည်သို့မျှ Uninstall လုပ်၍ မလွယ်အောင်ကတ်ဖဲ့နေသော proram များလည်းရှိပါသည်။ ယင်း program များကို ရှင်းလင်း နိုင်သည်။ အစွမ်းထက်လက်နက်မှာ Geek uninstaller ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ရရှိပြီး protable အဖြစ် သုံးနိုင်သည်။ www.bit.ly/geek 408 မှ download ချနိုင်သည်။ Download Free နေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပြီး download ချပါ။ ပြီးလျှင် extract လုပ်ပါ။
ပြီးလျှင် .exe ဖိုင်နေရာတွင် ဘယ်ကလစ်နှစ်ချက်ခေါက်ပါ။ ကွန်ပျူတာထဲတွင် install လုပ်ထားသော program များပေါ်လာပါမည်။ Uninstall list ထဲတွင် လာမပြသော program များလည်း လာပြနိုင်သည်။ ခေါင်းမာနေသော program ကိုဖယ်ထုတ်ရန် ယင်းပေါ်တွင် ညာကလစ်ထောက်ပါ။ Force Removal ကိုရွေး ပေးပါ။ ယင်းက registry entry အပါအဝင် ဖိုင်အကြွင်းအကျန်အားလုံးကို ပြောင်စင်အောင်ဖျက်ပေးပါမည်။ မိမိဖယ်ရှားလိုသော program သည် မည်သို့သောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ယင်းကိုအဘယ်ကြောင့် ဖျက်၍မရ သည်ကို မသိပါက ယင်းတွင် ညာကလစ်ထောက်ပြီး Google for ကိုရွေးပါ။ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက် အလက်ကို အင်တာနက်တွင် တက်ရှာပါ။
♪ " Xiaomi ရဲ့ ၂၀၁၇ ထုတ် Mi Notebook Air လာမည် " ♫
Xiaomi က ယခင်နှစ် ဇူလိုင်လမှာ Mi Notebook Air ကို စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလမှာလည်း 4G Model ကို ရောင်းချ ပေးခဲ့ပါတယ်။
4G Model ဟာ ပထမတော့ မူလမော်ဒယ်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်မယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ 4G စွမ်းရည်သာ ပါရှိလာပါတယ်။ အခုတော့ မျိုးဆက်သစ်မော်ဒယ်တစ်ခုကို Xiaomi က မိတ်ဆက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအရ ၂၀၁၇ ထုတ် Mi Notebook Air မှာ အလွန်ပေါ့ပါးတဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်-လစ်သီယမ်ကိုယ် ထည်တပ်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမော်ဒယ်ဟာ ၂၀၁၆ ထုတ် ၁၂.၅ လက်မ Mi Notebook Air ရဲ့ ၁.၀၇ ကီလိုဂရမ်ထက် ပေါ့ပါးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်မော်ဒယ်ရဲ့ကိုယ်ထည်ကို ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် TaiSol Electronics နဲ့ ဂျပန်အခြေစိုက် ShinSho တို့က ပူးပေါင်းတီထွင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်-လစ်သီယမ်ကိုယ်ထည်ဟာ အလူမီနီယမ်ထက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုပေါ့ပါးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပိုမိုအကြမ်းခံပါတယ်။ အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ မဂ္ဂနီဆီယမ်-လစ်သီယမ် ကိုယ်ထည်များဟာ တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထုတ် Mi Notebook Air ဟာ ဈေးနှုန်းသက်သာမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Touch Bars ပါတဲ့ MacBook Pro ကို ဥပဒေ စာမေးပွဲများတွင် မသုံးရန် တားမြစ်
အမေရိကန် ပြည်နယ်အချို့ရဲ့ ဥပဒေစာမေးပွဲတွေမှာ Touch Bars ပါဝင်တဲ့ MacBook Pro တွေကို တားမြစ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီထုတ်ကုန်သစ်အသုံးပြုတဲ့ ကျောင်းသားတွေက စာရွက်နဲ့ ဘောပင် ဒါမှမဟုတ် အခြားလက်တော့ပ်ကို အသုံးပြုပြီး ဖြေဆိုရတော့မှာပါ။
Touch Bars နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေကို Testing ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ Examsoft က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အရင် function key တွေနေရာမှာ အစားထိုးခဲ့တဲ့ OLED screen မှာ predictive text function ပါဝင်တဲ့အတွက် စာမေးပွဲရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ Examsoft က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားလို အချို့ပြည်နယ်တွေမှာတော့ MacBook ပိုင်ရှင်တွေက predictive text ကို disable လုပ်ထားရင် လက်တော့ပ်ကို အသုံးပြုခွင့် ပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နယူးယောက်လို ပြည်နယ်အချို့မှာတော့ အသုံးပြုခွင့် လုံးဝပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
ဆွေသဟာ Mobile မှသံဃာတော်တွေက်ို SIM Card အခမဲ့ မှတ်ပုံတင်ပေးမည်။
မင်္ဂလာပါဆွေသဟာ Mobile မှာသံဃာတော်များကိုသာ အခမဲ့ SIM Card အားလုံးကြိုက်ရာ SIM Card မှတ်ပုံတင်တင် အခမဲ့ တင်ပေးသွားပါမည်ဟု ဆွေသဟာ Founder သီဟထိုက် မှ
ပြောကြားသွားပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သံဃာတော်များအနေဖြင့် " သံဃာကတ်" ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ပြီး "မြောက်ဒဂုံ ၃၅မှတ်တိုင်နှင့် နာရီစင်မှတ်တိုင်ကြား"ကို လာရောက် မှတ်ပုံတင်နိုင်ကြောင်း
အခုခေတ်မှာ ဟန်းဆတ်တွေများလာခြင်းနှင့်အတူ 4G ကွန်ရက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်း တိုးလာပါပြီ 4G ကသုံးဖို့အနည်းငယ် နေရာတွေကျန်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာ 4G handset တွေနည်း
နေတာပါ။နောက်ပြီး တရုတ်ပြည်မှာ 4G ခေတ်စားလာတာ 2နှစ်ကျော်ကျော်ရှိနေပါပြီ ။
ဒါပေမယ့် 4G ကို မြန်မာပြည်မှာ လပိုင်းလောက်ကြားရပြီးသုံးသူရောက်ရာအရက်မှာ လက်ချိူးရေနိုင်နေပါတယ်။
ဒါကလည်း နိုင်ငံတော်နဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပေမယ့်ပြည်သူတွေရဲ့လစာနဲ့ 4G အသုံးပြုနိုင်မည့် ဟန်းဆတ်ကို မ၀ယ်နိုင်သေးတာကတစ်ကြောင်းပါ။တရုတ်ပြည်မှာ 4G ခေတ်စားလာတော့
သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ 4G handset တွေကို သူတို့က အခြားတိုးတတ်စနိုင်ငံလေးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။(သူတို့ဆီမှာတော့ မသုံးတော့ပါ)
အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဆီ တရုတ်ဖုန်းတွေနာမည်မရှိတဲ့တရုတ်ဖုန်းတွေက နာမည်အစုံနဲ့ရောက်လာတော့တာပဲ... သူတို့မှာ Error တစ်ခုစီ ရှိနေပါတယ် ။ဒါကိုဗဟုသုတမကြွယ်ဝသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့
ရွှေမြန်မာတွေက ဈေးသက်သာတယ် ဆိုဒ်ကြီးတယ်ဆိုပြီးသုံးကြပါတယ်(နယ်တွေမှာပိုသုံးတယ်လို့မြင်ရပါတယ်) ဟုတ်ပါတယ် သုံးပါတယ် နောက်တော့ပစွည်းပြတ်တယ် အဲ့တော့ ပြင်ချင်တယ် ဘယ်ပြင်
ဇာတ်လမ်းကတရုတ်ကြီးက အမိူက်တွေမြန်မာနိုင်ငံထဲသွန်ပလိုက်တာပဲ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်က သိသလောက်ပဲပြောတာပါ။
နောက်ပိုင်းထပ်ပြောအုံးမှာပါဒီပို့စ်နဲ့ဆိုင်တာပဲအရင်တင်သေးတာပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီမူရှိ/မရှိ/ အခွန်ဆောင်ထား /မထား ဒါတွေကိုလည်း မသိ စွတ်ပြီးသုံးတဲ့ ရွှေမြန်မာကတော့ Viber နဲ့အီစီကလီ
ဟုတ်ပါတယ်ဒီအထဲမှာတော့ကျွန်တော် ပြောချင်တာ ကိုယ်တွေ ဘယ်လောက်ပြောပြော ကိုယ်အပါအ၀င် ဒါတွေပဲသုံးနိုင်လို့သုံးအုံးမှာပါပဲ။ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆို ဘယ်လိုမျိူး ဒီလိုအမိူက်တောထဲ
ကနေ ကိုယ်ပိုင် စက်ရုံ ၊ Showroom၊ Company ရှိတဲ့အထဲကမသုံးချင်ဘူးလား၊ တိုက်ခန်းကျင်းကျင်းလေးထဲမှာ ၀န်ထမ်း၎ယောက်နဲ့ မြန်မာစကားမပြောတတ်တဲ့ "၀" ဆီက၀ယ်မလား စောစောက
ပြောတဲ့ ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံ၊ Showroom၊Company ရှိတဲ့ ဆီကနေ၀ယ်မလား ကဲဘယ်လိုဝယ်မလဲ ကျွန်တော်ကတော့ ရွှေးပေးနေမှာပါ အခုလည်းတစ်ခုရွှေးပေးထားပါတယ် အောက်မှာကြည့်ပြီး
မင်္ဂလာပါဆွေသဟာ Mobile မှကြိုဆိုပါတယ်။
တန်ဖိုးသက်သာပြီး အရေးအသွေးပိုင်းလည်းစိတ်ချရပြီး လက်ရှိသုံးစွဲသူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ AOVO Smartphone နဲ့မိတ်ဆတ်ပေးချင်ပါတယ်။
ဖုန်းမော်ဒယ်တိုင်းဟာ ဒီဇိုင်းသေသပ်လှပတယ် ကျစ်လစ်တယ် ဈေးနူန်းချိူသာတယ် အာမခံတစ်နှစ်စီပါကြတယ်။ အောက်မှာ ဖုန်းမော်ဒယ် တစ်မျိူးစီရှင်းပြထားပါတယ်။
သုံးစွဲသူတိုင်းအရမ်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Smartphone အမျိူးအစားထဲကနံပါတ်၁ပါပဲ။ Screen 5.5 inches ဖြစ်ပြီးတော့ Android Version 5.1 ဖြစ်ပြီး Internal16GB ဖြစ်ပါတယ်။
Dual Sim Dual 4G ဖြစ်ပြီး Extrnal 64GBထိထပ်စိုက်နိုင်ပါတယ်။RAM 2GB ပါဝင်ပြီး CPU Octa-Core 1.4GHZ ပါဝင်ပါတယ်။
Battery 3200mAh ပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာစာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို System ဖောင့်အနေနဲ့ပါပြီးဘာသာစကား၄၅မျိူးပါဝင်ပါတယ်။Fingerprinte ကို 0.5second ထိလိုက်တာနဲ့ပွင့်လာပါမယ်။
Security ပိုင်းအနေဖြင့်တော့ Swipe Lock,Patten Lock, Pin Password Lock,Fingerprint Lock ဆိုပြီ6း funtion ပါဝင်ပါတယ်။Touch Gorilla Glass ကို တပ်ဆင်ထားပြီး LCDကိတော့ SuperAmoLed တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
Camera ပိ်ုင်းကတော့ Back 13MP ဖြစ်ပြီး Font 5MP ဖြစ်ပါတယ်။Flash မီးပါဝင်ပါတယ်။Google Service ကို ပါဝင်သည့်အတွက် CoC Account ,PokenMon ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Screen Size 5.5inches ဖြစ်ပြီးလေးထောင့်ဆန်လို့ မျက်လုံးထဲမြင်ကြည့်ပါ အလွန်လှပနေပါတယ်။
Android Version 5.1 ဖြစ်လို့ App Game အစရှိတဲ့ Software ပိုင်းဆိုင်ရာများကို အကုန်လုံးကိုက်ညီမူရှိပါတယ်။RAM 2GB ဖြစ်လို့ ဂိမ်းအကြီးများ Software size အကြီးများကို Run နိုင်ပါတယ်။
CPU Octa-Core 1.4GHZ ဖြစ်လို့ မြန်ဆန်မူအပိုင်းမှာ ပြောစရာမလိုလို့ လေးလံခြင်းကင်းဝေးပါတယ်။Camera Back13MP ဖြစ်ပြီး Font 5MP ဖြစ်လို့ Selfie ဆွဲသူများအနေဖြင့် အပြည့်အ၀
လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ် ပြီးတော့ Camera Setting ပိုင်းမှာ Edit လုပ်လို့ရတဲ့အပိ်ုင်းတွေနဲ့ ကျန်တဲ့ Effect များပါဝင်တဲ့ကြောင့် Camera 360 ဆိုတဲ့ Software များမလိုအပ်တော့
ပါဘူး။မဲနေတဲ့မျက်နှာဖြူသွားမယ် ၀က်ခြံတွေဖြစ်နေလားဒီCamera လေးနဲ့သာရိုက်လိုက် ၀က်ခြံဆိုတာပျောက်ပြီးချောမွေ့တဲ့ အပြင်နဲ့မတူတဲ့ အလှပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကို ထွက်လာမှာအမှန်ပါပဲ။
Internal 16GB ပါဝင်လို့ Internal Memory Full ဖြစ်စရာလုံးဝမလိုဘဲ Extrnal 64GB ထိ စိုက်နိုင်တာဟာလည်း Memroy များများသုံးစွဲသူအတွက် အပြည့်အ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ။
LCD ကတော့ SUper AmOLED သုံးထားလို့ မြင်ကွင်းပိုင်းကြည်လင်ပြတ်သွားစွာဖြစ်နေမှာပါ။Gorilla Glass ကိုအသုံးပြုထားလို့ မှန်သားပိုင်းချောမွေ့ပြီး တော်ရုံထိခိုက်မူဖြင့် ကွဲသွားတာခြင်းမရှိပါဘူး။
င်္Finger Printe ကလည်း 0.5Second အတွင်းပွင့်ပေးနိုင်လို့ Lock ဖွင့်ရာမှာ လုံခြုံရေးစိတ်ချရပြီးမြန်ဆန်မူကြောင့် စိတ်ချမ်းသာစေမှာပါ။Google Service ပါဝင်ပြီး မလိုအပ်သော Software များမပါဝင်တဲ့
အတွက် Branded စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသုံးသလိုခံစားရစေမှာပါ။ကိုယ်ထည်ကတော့ ကျစ်လစ်ပြီးလေးထောင့်ဆန် ရွှေရောင်လေးနဲ့ဖုန်းအုပ်နေပါတယ်။Bodyကတော့ Metal Frame ဖြစ်ပါတယ်။မှန်က မို့ပြီး
ချောမွေ့လို့ လက်ထဲကတောင်ချချင်ပါ့မလားမသိဘူးနော်။Samsung ဖုန်းတစ်လုံးလား MI ဖုန်းလား Huawei လား ခွဲခြားမရအောင် ကောင်းမွန်တဲ့ Smart ကျကျကိုင်နိုင်မယ့် Smartphone လေးတစ်လုံ
းဖြစ်ပါတယ်။အရောင်ကတော့အဖြူ၊ရွှေရောင်နှစ်မျိူးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။သုံးကြည့်ပါ ပေးရတဲ့ဈေးနူန်းထက်ပိုပြီးသာတဲ့ စိတ်ကျေနပ်မူရစေမှာပါ။ပြောရရင်Mi လား? Huawei လား ? Smasung လား?
ဘာဖုန်းလဲဆိုတောတောင်ပြောလို့မရတာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းကတော့ Xiaomi Mi4 နဲ့သွားတူတာတော့အမှန်ပါပဲ။အားသွင်းရင် မီးအချက်ပြတဲ့ Sensor လည်းပါပြီး data Reset ချလို့မရအောင
် Patten ခံထားလို့လည်းရတဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျန်တာကတော့ မိမိဘာသာသုံးကြည့်မှသိပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘာတွေလုပ်ပေးလဲ လက်ဆောင်ကကောဘာတွေလဲ ဈေးနူန်းကကော ဘယ်လောက်လဲ?
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Power Bank ,SIM Card ,Bill Card,Memory 8GB ,Selfie Stickများလက်ဆောင်ပေးပြီးfacebook Account,Wechat-beetalk-viber,Line Account များဖွင့်ပေးပါတယ်။
နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပို့ခ အခမဲ့ဖြင့် ၇န်ကုန်ဆို အိမ်တိုင်ရာရောက် လာရောက်ပို့ဆောင်ရှင်းပြပေးပါတယ်။နယ်သမားများအတွက်တော့ ပို့ခအခမဲ့ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
ဈေးနူန်းကတော့ 1xxxxx ဖြစ်ပါတယ်။
Model V9 Smartphone
သူလည်းပဲ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာထူးခြားလှပတဲ့ ကျစ်လစ်တယ် ချောမွေ့တယ် Metal နဲ့ ကိုယ်ထည်ကို ပြုလုပ်ထားလို့ ဖုန်းကို ကိုင်ကြည့်ရင် အေးမြပြီးချောမွေ့တဲ့ခံစားချက် လေးထောင်စံပြီး ရွှေရောင် အပြည့်ဖြစ်
နေလို့ မြင်ရတဲ့ အေးမြတဲ့ မြင်ကွင်းခံစားချက်ကို သင် လက်နဲ့ထိမိတာနဲ့ခံစားနေရမှာပါ။ Screen 5.5 inches ဖြစ်ပြီးတော့ Camera သမားတွေအတွက်တော့ Back Camera 5MP နဲ့ Font 2MP ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Original ပါတဲ့
Photo Effect ပြင်လို့ရတဲ့ Function တွေပါဝင်လို့ သင့်အနေနဲ့ Camera သုံးမယ့်သူဆို ၀ယ်လိုက်ပါ။ Internal Memory 8GBပါဝင်ပြီး Extrnal 64GB အထိထပ်စိုက်လို့ ရလို့Memory များများသုံးချင်
သူတွေအတွက် ၀ယ်သင့်တဲ့ဖုန်းပါ။Motion များကတော့ Double touch ဆိုပါဝါပွင့်တာ C ဆို ဖုန်းပွင့်တာ M ဆို Music ပွင့်တာ အစရှိတဲ့ gestrue တွေပါဝင်လို့ခေတ်မှီတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ခေတ်မှီ
တဲ့ဖုန်းကိုကြိုက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တော့ဝယ်ယူသင့်တဲ့ဖုန်းအမျိူးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုအဓိကထားသူ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဒီဇိုင်းပြိုင်ချင်သူတွေအတွက်ကတော့ Huawei P8 ထက်
ဒီဇိုင်းပိုလန်းတဲ့ ဖုန်းလို့ယူဆမိတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေ တော့ လက်မလွှတ်သင့်ပါဘူး။Game ဆော့မှာလား HD game တွေဆော့နိုင်ပါတယ်။COC COK game တွေကို Gmail နဲ့
အကောင့်ချိတ်ဆက်ဆော့နိုင်ပါတယ်။မြန်ဆန်မူကတော့ CPU ကို Quad-Core 1.5 နဲ့လုပ်ထားလို့ မြန်ဆန်တာကတော့ Second ပိုင်းအတွင်းခိုင်းစေသမျှကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။RAM 1GB သုံးထားပေး
ပါတယ်။မှန်သားကတော့ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဖုန်းတွေမှာတပ်ဆင်တဲ့ Gorilla Glass ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး Super AMOLED LCD ကိုသုံးထားလို့ Graphit ပိုင်းမှာတော့သင့်ကိုဆွဲဆောင်နေမှာပါ။
မှန်သားကလည်းချောမွေ့ LCD ကလည်းကောင်း ကိုယ်တိုင်ကလည်းချောမွေ့လေးထောင်ဆန် ဒီလိုဖုန်းကို အိမ်မက်ထဲထည့်မက်ရင်တောင်မနက်ချက်ခြင်းဝယ်ချင်သွားမယ်ဗျာ။
Model V8 Smarphone
ကောင်းတာတွေပြောလွန်းလို့ လူတောင် ဗိုက်ဆာနေသလိုပဲလို့ပြောရမလိုပဲ နောက်ထပ်ထပ်လာတဲ့ V8 Smartphone ကလည်း ဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်း ပါးချပ်ချပ်နဲ့ ရွှေရောင်ဒီဇိုင်းဆို ရင်
Mi ဒီထဲက Mi4c နဲ့သွားတူနေတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျ။ Screen 5.5 inches ဖြစ်ပြီးတော့ Back Camera 5.0MP နဲ့ Font Camera 2MP ပါဝင်ပါတယ် ။ပါးချက်ကတော့ အစောပိုင်းက X9 နဲ့ V9 ထက်ကိုပါးသကိုးဗျ။
သူလည်းသူတို့လိုပဲ နည်းနည်းပဲကွာတယ် ။Camera သမားတွေအတွက်တော့ Back Camera 5MP နဲ့ Font 2MP ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Original ပါတဲ့
တဲ့ဖုန်းကိုကြိုက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တော့ဝယ်ယူသင့်တဲ့ဖုန်းအမျိူးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုအဓိကထားသူ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပါးလွှာတာခြင်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြိုင်လိုက်ပါ ဒီမော်ဒယ်က
ပါးလွှာတာကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူး။လေးထောင့်ဆန်ပြီး ကိုယ်ထည်ကို Metal Frame နဲ့လုပ်ထားသေးပါတယ်။COC COK game တွေကို Gmail နဲ့
အကောင့်ချိတ်ဆက်ဆော့နိုင်ပါတယ်။မြန်ဆန်မူကတော့ CPU ကို Quad-Core 1.3 နဲ့လုပ်ထားလို့ မြန်ဆန်တာကတော့ Second ပိုင်းအတွင်းခိုင်းစေသမျှကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
RAM 1GB သုံးထားပေးပါတယ်။မှန်သားကတော့ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဖုန်းတွေမှာတပ်ဆင်တဲ့ Gorilla Glass ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီးSuper AMOLED LCD ကိုသုံးထားလို့
လိုအပ်သော Softwareများထည့်သွင်းပေးပြီး ကစားလိုသော Game များထည့်သွင်ပေးပါတယ်။
ဈေးနူန်းကတော့ 9xxxx ဖြစ်ပါတယ်။
Model V7 Smartphone
Model V7 ဖုန်းလေးကတော့ HTC အမျိူးအစားလေးနဲ့သွားတူပြီးတော့ Screen ကို အပြားတော်တော်ကြီးတာကိုမှကြိုက်တဲ့ ကိုကိုမမတွေအတွက်တော့ အရေးအသွေးပိုင်းနဲ့ Screen ကို
5.5 နဲ့ အကျယ်ကို တော်3.0 လောက်အကျယ်နဲ့ ဖုန်းလေးကတော့ ဂိမ်းသမားတွေနဲ့ ဆိုဒ်အကျယ် နဲ့ကြိုက်တဲ့သူတွေလက်မလွှတ်သင့်ပါဘူး ။ CPU 1.3 Quad-Core,RAM1GB,Internal 8GB
နဲ့ Extrnal 32up ဆိုဒ်နိုင်တယ်လေ။Camera ကလည်း 5.0MP Back နဲ့ Font 2.0MP ဖြစ်လို့သင့်အနေနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်တာနဲ့သင်ဘယ်လိုပုံနဲ့အရေအသွေးကိုခံစားနေရပြီဆိုတာသင့်
ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ကျန်သော Motion တွေကတော့အရင်ဖုန်းတွေလိုပဲ့ Double touch ဆိုပါဝါပွင့်တာ C ဆို ဖုန်းပွင့်တာ M ဆို Music ပွင့်တာ အစရှိတဲ့ gestrue တွေပါဝင်လို့ခေတ်မှီတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါ။
Touch နဲ့ LCD တွဲလျက်ဖြစ်နေလို့သင်တို့အနေနဲ့ မှန်ကွဲရင် မှန်ပဲလဲရမှာပါ LCD ကွဲရင် LCD ပါပဲ သက်သက်ဆီလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ ဒီ AOVO smartphone တွေ
ထဲမှာ Size အကြီးဆုံးနဲ့ဖုန်းကတော့ သူရဲ့ထူးခြားတဲ့ Super Power ပါပဲ။
ကျန်တဲ့မော်ဒယ်တွေကတော့ Spec တွေရှင်းပြရင် နားလည်လိမ့်မယ်ထင်လို့ မော်ဒယ်ကလည်းများနေလို့အောက်မှာ သူတို့ Spec တွေကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
Model AO7 Smartphone
Internal Memory -4GB(Extrnal 32 UP)
CPU -Quad-Core 1.3GHZ
Screen Size -5.0 inches QHD Screen
Power Bank ,SIM Card ,Bill Card,Memory 8GB ,Selfie Stickများလက်ဆောင်ပေးပြီးfacebook Account,Wechat-beetalk-viber,Line Account များဖွင့်ပေးပါတယ်။
Model AO5 Smartphone
Internal Memory -8GB(Extrnal 32 UP)
CPU -DualCore 1.3GHZ
Model PO1 Smartphone
Model VO1 Smartphone
လိုအပ်သော Softwareများထည့်သွင်းပေးပြီး ကစားလိုသော Game များထည့်သွင်ပေးပါတယ်
Model A11 Smartphone
လိုအပ်သော Softwareများထည့်သွင်းပေးပြီး ကစားလိုသော Game များထည့်သွင်ပေးပါတယ်။1
ဟန်းဆတ်အားလုံးကို အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီး Accessories များကိုလည်းပြည့်စုံအောင်လက်ဆောင်ထည့်ပေးပါတယ် Sparepart များကိုလည်း အပိုရှိပါသည်။
လက်ဆောင်များပြီး အရေးအသွေးစိတ်ချ ဒီဇိ်ုင်းလုံးဝမိုက် ဈေးနူန်းသင့်တဲ့ Smart phone ကိုသင့်အနေနဲ့ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
February လ promotion အနေဖြင့် ၀ယ်ယူသူများအားလုံးကို ပေးသည့်လက်ဆောင်များကို တစ်မျိူးဆီကို
ဆွေသဟာ Mobile (မြောက်ဒဂုံ)
မြောက်ဒဂုံ ၃၅မှတ်တိုင်အနီး-ပင်လုံလမ်းမကြီး-နာရီစင်နဲ့ ၃၅မှတ်ိုင်ကြား
မှတ်ချက်။ ။ ယခုကြေငြာကို ဆွေသဟာ Mobile မြောက်ဒဂုံမှကြေငြာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီ Tool လေးကို lenovo ကနေတရာဝင် ထွက်ရှိထားပါတယ်တဲ့။သူကတော့ Qualcomm အသုံးပြုထားတဲ့
ဖုန်းအမျိူးမျိူးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့လဲပြောထားပါသေးတယ်။
သူ့ရဲ့ အသုံးပြုပုံ Guide ကိုတော့ဒီမှာဒေါင်းလိုက်ပါ ။
အောက်မှာတော့ Qualcomm FRP Tool ကို Download ဆွဲလိုက်ပါ။
အမျိုးအစား: FRP Remove Solutions
♪ " Android ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကောင်းမွန်စေမယ့် Clean Master (Boost & Antivirus) " ♫
Android စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုသူတွေ ဖုန်းကို စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်နေအောင်၊ အသုံးပြုရတာ အမြဲတမ်းမြန်ဆန်ပြီး ရှင်းလင်းနေအောင်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို အကောင်းဆုံး Android ဖုန်း ဖြစ်နေအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် Clean Master ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းပေါင်း သန်း ၇၄ဝ ကျော်က ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုရတဲ့ Boost & Antivirus app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Junk notification တွေ မဝင်အောင် တားဆီးရှင်းလင်းပေးနိုင်ပြီး junk file တွေနဲ့ cache တွေကို ရှင်းလင်းပေးနိုင်တာကြောင့် ဖုန်း storage သက်သာစေပြီး speed ကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးကာ သင့်ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Memory Boost ရပြီး RAM ကို free up လုပ်ပေးကာ ဘက်ထရီစားသက်သာအောင်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖုန်းကို virus အန္တရာယ်မရှိအောင် အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီကာကွယ်ပေးနိုင်လို့ သင့်ရဲ့ privacy ကို အမြဲတမ်းကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အပူလွန်ကဲမှုဖြစ်စေတဲ့ app တွေကို ပိတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖုန်းပူတာနဲ့ CPU usage ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ပိုမိုကြာရှည်ခံအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘက်ထရီအခြေအနေကို စစ်ဆေးပေးပြီး အလိုအလျောက် run နေတဲ့ app တွေကို စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုဖို့အတွက် Android 2.2 နဲ့အထက် လိုအပ်ပါတယ်။
♪ " 2016 သည် PC များအတွက် ခက်ခဲသော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ " ♫
2016 သည်လည်း PC များအတွက် ခက်ခဲသော နှစ်တစ်နှစ်သာဖြစ်ခဲ့သည်။ PC တင်ဖို့ ရောင်းချမှုမှာ ဥရောပတွင် 6% ကျဆင်းခဲ့ပြီး Windows 10 သည်လည်း များစွာကူညီပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။ IDC ၏ စာရင်းများအရ ဥရောပတစ်ခွင် ရောင်းချခဲ့သော PC မှာ 72 သန်းသာရှိခဲ့ပြီး 2015 က 76 သန်းထိရှိရာမှ ကျဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် တောင်းဆိုမှုမြင့်မားသဖြင့် Notebook သည် desktop PC ထက် ရောင်းအားမြင့်မားခဲ့ပြီး Windows 10 သည်လည်း ထိုအချက်ကို မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ဟု IDC မှ ဆိုခဲ့သည်။ ထိုအချက်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ဘဲ Windows 10အား Free Upgrade ပေးခဲ့သဖြင့် PC ကို ချက်ချင်းအသစ်ဝယ်ယူရန် မလိုအပ်ခဲ့ပေ။
Desktop ရောင်းအားသည် မတည်ငြိမ်သည့်အပြင် ဆက်တိုက်ကျဆင်းနေပြီး EMEA မှ စုစုပေါင်း 6.9% ကျဆင်းခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။ အဓိကမှာ အလွန်ပါးလွှာသော device များနှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Chromebook များကြောင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အသုံးများလာကြသောကြောင့်ဟု IDC မှ ဆိုခဲ့သည်။
2016 စတုတ္ထ သုံးလပတ်အတွင်းတွင်မူ ဥရောပအနောက်ပိုင်းဈေးကွက်မှာ ကွဲပြားမှုများစွာရှိနေပြီး ထိုကာလတွင် PC ဈေးကွက်မှာ အနည်းငယ်တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ IDC ၏ သတ်မှတ်မှုတွင် desktop, notebook နှင့် workstation များကို Traditional PC ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး tablet နှင့်2in 1 device များ မပါဝင်ခဲ့ချေ။